Iimveliso zokugoba iinwele-Iingcebiso kumadoda aSisitayile | Amadoda aQinisekileyo
Iimveliso zokugoba iinwele
Amadoda amaninzi ayayazi indlela yokusebenzisa ithuba iinwele zawo kwaye ayazi ukuba iinwele ezinesitayile ezibukeka zintle kubo. Ukwenza umkhuba olungileyo wale nkangeleko Kuya kufuneka uzilolonge ngezandla zakho kwaye uzincede kwimveliso elungileyo ke kuya kufuneka ufumane ukujonga okunqwenelekayo. Ukuba awuyazi imbonakalo yokukhetha indlela yokwenza iinwele onokuoyiswa ngayo ngabanye iimodeli ezivela kwii-80s.
Kwenye inqaku lethu besikufundisile Zeziphi ezona ndlela zibalaseleyo zokufumana iinwele ezihonjisiweyo Enye yezona ndlela zibalaseleyo onokuthi ufezekise oku kukuya kwizinwele kunye nokufumana imvume, Iya kuba kuphela kwendlela oya kuhlala ugcina uhlobo olufanayo lwe-curl yonke imihla kwaye kungabikho namnye umzamo. Kodwa ukuba into yakho kukufumana iinwele ezigobileyo amaxesha ngamaxesha, apha sicebisa ukuba zeziphi ezona mveliso zibalulekileyo zokugoba iinwele ezikhoyo kwimarike.
1 Ungazenza njani iinwele zakho
2 Iimveliso zokugoba iinwele
2.1 Ukukhusela ukutshiza
2.2 Ukufafaza ityuwa elwandle
3 Ukulungisa iinwele
Ungazenza njani iinwele zakho
Siphakamisa isikhokelo esikhawulezayo malunga nokuba ungazigoba njani iinwele zakho, Siza kubonisa kuphela amanyathelo ambalwa alula kwaye ngendlela ebonakalayo, ukuze ufezekise iziphumo ezilungileyo. Kulula kakhulu ukuba kufuneka usebenzise kuphela iimveliso ezihambelanayo ukukhulisa loo nto uyifuna kakhulu:
Hlamba iinwele zakho njengesiqhelo kwaye ukuba kunokwenzeka ngeshampu ekhethekileyo yee-curls. Ungasebenzisa kwakhona i-conditioner ekupheleni kokuhlamba kodwa kubalulekile ukuba uhlambe iinwele zakho kakuhle.
Zomise iinwele zakho kancinci ngetawuli kunye sebenzisa ukutshiza kobushushu.
Sebenzisa ityuwa yolwandle ukufumana iinwele zendalo nezigobileyo.
Zomise iinwele zakho ngesomisi kwaye uncede ii-curls ukuba zenze ngeminwe nangezandla.
Ukuba ufuna ii-curls zibumbane ngakumbi kwaye zomelele ngakumbi, unako sebenzisa ijeli yokulungisa.
Kubalulekile ukuba ukufezekisa i-wavy okanye iinwele ezigobileyo usebenzisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kwaye ngokufanelekileyo, kuba ziya kuwenza lula umsebenzi wakho kwaye oko kuya kubonakala kwiziphumo, nangona kunjalo, sicebisa apha ngezantsi ukuba zeziphi ezona mveliso zibalulekileyo kwaye zixabiswa ngabathengi bakho .
I-HSI Professional ngeoyile yeargan
Sisikhuseli sobushushu esiqeqeshiweyo, esine-silky kunye nesiphelo esimenyezelayo. Iziphumo zayo zezendalo, zingenamafutha kwaye ziya kunika iinwele zakho ukukhanya okukhanyayo.
Iinwele eziHloliweyo zeTherm Thermal
Ngomnye umkhuseli osebenza kakuhle. Isebenza njengekhaka ngokwenza ifilimu yekeratin kwaye ke kuthintele ukoyikiswa kwamanzi emzimbeni xa ubeka iinwele zakho kumaqondo obushushu aphezulu.
ISchwarzkopf Professional Osis Flatliner
Ukhuseleko lunika njani iziphumo ezilungileyo kakhulu kwaye ukuba zisetyenziswa ziingcali ziya kuba yinto ethile. Ifomula yayo yenzelwe ukudala omnye umqobo okhuselayo kunye nokwenza ukuba iinwele zibonakale zisempilweni emva koko.
Ukufafaza ityuwa elwandle
Ayizizo iimveliso ezaziwayo kuba besisoloko sisebenzisa ijeli yeenwele kunye namagwebu ukufumana i-curl kwaye siyigcine ilungile. Ezi zifafazi ziqulathe inani elincinci nelincinci letyuwa, kunye nezinto ezifana neoyile yeArgan okanye ioyile yaselwandle. Ngale ndlela kwaye ngenxa yetyuwa, ii-curls zendalo ziya kwenziwa, kunye nokuthamba kunye nokuthamba, ngaphandle kokuqina.
TIGI - ityuwa yokutshiza 270 ml
Sinemveliso abathengi bayithanda kakhulu. Inika imbonakalo yendalo ngaphandle kokushiya iinwele zinamafutha. Abanye abantu abayithandi le mveliso kakhulu njengoko inika imbonakalo eyomileyo, kodwa bubunjani ekufuneka bushiywe ukufezekisa ukusebenza kwe-surfing.
IZINTO ZE-LONDON-150 ml
Yenye yezindululo kwaye ixabiswe kakuhle ngabathengi bayo, ityuwa yayo yendalo kwaye ikuvumela ukuba udlule izandla zakho ngaphandle kokushiya intsalela. Inuka kamnandi kwaye ilungele zonke iintlobo zeenwele kunye nobude.
I-DA DUDE-I-curl activator-250 ml
Chaza ii-curls ngaphandle kwe-silicone, yenza amaza endalo ukunika ubume kunye nevolumu. Ukuba awufuni iinwele zakho zichaneke kwaye zingaphili, le yeyona nto ifanelekileyo yokutshiza, ikwabonelela ngevumba elitsha.
I-Tahe Botanic yokuLungisa iGel
Yijeli enombhalo oguqukayo onika ukukhanya kwizinwele zakho, ukwakheka kwayo kuya kugcina i-curl ichaziwe kwaye iphephe i-frizz xa iinwele zomile. Ngempembelelo yayo yokulungisa, i-curl iya kuhlala ixesha elide.
I-Adiss curl yokulungisa ijeli
Oku kulungiswa komelele ngakumbi kwaye kuthintela i-anti-frizz, nangona inefuthe elibonakalayo ngokubhekisele kubukhuni, inika ukutyeba kunye nokuthamba kweenwele, okunempembelelo entle. Iqukethe i-aloe vera kunye neoyile yejojoba yokwenza iinwele zakho zithambe.
Nceda ii-curls zakho ukuba zime kakuhle, nkqu nezona zingalawulekiyo. Fumana ukubonakala okungaqhelekanga, okuchaziweyo kunye nokungenasiphelo. Yenziwe ngokhula lwaselwandle ukugcina iinwele zisempilweni kwaye zinamanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iimveliso zokugoba iinwele
Unxiba njani umtshato wosuku